Mashruuc ”cayr” lagu siinayo qoysas sabool ah oo loo fasaxay malaayiin doollar (Arag cadaalad darrada ka muuqata) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Mashruuc ”cayr” lagu siinayo qoysas sabool ah oo loo fasaxay malaayiin doollar...
(Muqdisho) 22 Juun 2021 – Bankiga Adduunka ayaa ogolaaday in Somalia la siiyo adduun lacageed oo dhan 185 milyan oo doollar oo la marinayo DF Somalia, si loogu caawiyo dadka maatada ah ee Somalia.
Lacagtan oo lagu maalgelinayo Mashruuc la yiraahdo Baxnaano oo uu horay lacag ugu ogolaaday Bankiga Adduunka si loogula dagaallamo faqriga haysta dadka ay hayntoodu yar tahay, iyadoo ay lacagtu u kala baxayso 110m iyo 65m iyadoo la ogolaaday bishii Agoosto 2019-kii.
Lacagtan ayaa sidoo kale looga gol leeyahay in lagu dhiso mugga raasumaalka dadwayne ee dalka Somalia oo aad u liita iyo sidoo kale adkaysiga marxaladeed ee dadka ku dhaqan meelaha fog fog ee uu adeeggu ku yar yahay ee miyiga ah si wax lagaga qabto barakacyada ay duruufaha iyo abaaruhu keenaan, sida uu sheegay Baanka Adduunku.
Mashruuca Baxnaano ayaa waxaa ka faa’iideysan doona ilaa 200,000 oo ah qoysaska Soomaalida faqriga ah ee leh ciyaalka da’da yar sida 5-jirrada, kuwaasoo bishii la siin doono 20 doollar oo Maraykan ah, si ay ugu kaashadaan cuntada, caafimaadka iyo waxbarashada.
Si loola tacaalo amaan xumada dhanka quudka, waxaa qoysas kale oo gaaraya ilaa 150,000 ay bishii heli doonaan 60 doollar, si ay uga gaashaantaan abaaraha iyo quud xumada ka dhashay ayaxa ku habsadey Geeska.
CADAALAD DARRO IYO TIRAKOOB KHALDAN
Yeelkeede, Mashruucan Baxnaano oo la daah-furay 20-kii Abriil 2020 ayay doodi ka dhalatay cadaalad darro ka muuqata sida loo qoondeeyey.
Hoos ka eeg jaantuska tirakoobka…
Previous articleTurkiga oo qarka u saaran xaqiijinta fursad istaraatiji ah oo uu NATO kula gorgortami doono (Wefdi Khamiista tegaya)
Next articleMasar oo xabsiyo dhaadheer ku xukuntay hablo Tik Tok anshax xumo ku faafinayey (Somalia oo…)